I-China NFC-PCA-NTSC / 0.48 / 7% / 40 / G-FU i-harmonic ingcinezelo ye-capacitor ekrelekrele yokusasaza amandla ombane kunciphisa ukulahleka komgca kunye neFektri | ukudumba
I-NFC-PCA-NTSC / 0.48 / 7% / 40 / G-FU i-harmonic ingcinezelo ye-capacitor ekrelekrele yokusasaza amandla ombane kunciphisa ukulahleka komgca
NTSC series umnqongo capacitor okrelekrele
Ukuphakama kwepowusta: ≤ 2500m
Iqondo lobushushu lokusebenza: - 20 ℃ ～ + 45 ℃
Umbane ulinganisiwe: 0.4kV
Umthamo omiselweyo: ≤ 80kvar isigaba sesithathu
≤ 20kvar into enye
Inqanaba lokhuselo: IP20
Umgangatho olawulayo: gb15576-2008
Ubunzima: 54.16kg (30g)
Ukutshintsha into: I-Thyristor
Umsebenzi wokukhusela: ngaphezulu kobushushu bangoku / obungaphezulu kobushushu
IHarmonics: kunye neeharmonics ezicinezelweyo
Imowudi yembuyekezo: imbuyekezo yesahlulo sesigaba / imbuyekezo emithathu yenqanaba
Imodyuli ye-NTSC yemodyuli ekrelekrele isebenzisa i-thyristor switch njengokutshintsha kwezinto, kwaye idibanise isaphuli sesekethe, iswitshi yokutshintsha, i-cylindrical capacitor, i-reactor kunye nemodyuli enye, efanelekileyo inkundla ye-harmonic. Isiginali yolawulo yamkela i-RJ45 interface. Umsebenzi okhuselayo okhoyo ngoku uthintela umngcipheko okhoyo ngoku obangelwa yinkqubo yesandi. Imodyuli ixhasa usetyenziso lweqonga leapp, ulwazi lokusebenza kwemodyuli (inqanaba, ukulayita) Inokubonelela ngedatha enkulu yokusebenza okungagcinwanga okungagcinwanga kunye nokugcinwa.
Sidlulile ukuqinisekiswa kwenkqubo esemgangathweni ye-ISO9001 kunye ne-ISO14001 yokulawulwa kwenkqubo yokusingqongileyo. Iimveliso zethu zine-CE, isiqinisekiso seCCC. Oko yasekwa, ixabiso lethu kunye nodumo lwethu ziye zaphuculwa rhoqo phantsi kwemvume yabathengi. Inkampani yethu igqithisile ukusuka kwimowudi yokuqala yorhwebo iye kwimveliso ehlanganisiweyo yangoku. Ngoku singabasebenzi abayi-100 kunye nendawo yomzi-3000m2, kubandakanya uyilo lwabantu aba-5 kunye neqela lobuchwepheshe. Imithwalo ye-DOTO ithunyelwe ngaphandle eJapan, Turkey, India, Vietnam, Singapore, Russia nase Russia nakwamanye amazwe. Sisoloko sibonelela ngeemveliso ezisemgangathweni ophezulu, inkxaso enobuchule kunye nenkonzo yasemva kwentengiso kubathengi bethu ngokusebenzisa amava ethu obuchwephesha, izixhobo eziphambili kunye nenkqubo yolawulo olupheleleyo.
I. Iingcebiso Zokhuseleko
1. ukufakelwa, ukufakelwa kweengcingo nokugunyaziswa kwesi sixhobo kuya kwenziwa ngokwendlela namanyathelo achazwe kule ncwadana yemigaqo, kwaye kuya kuthi kunikwe ingqwalaselo kwidayagramu yeentambo kunye neleyibhile yesazobe yemodyuli.
2. Imodyuli yegobolondo ngokucacileyo yonakele, ungaqhubeki nokufaka kunye nokusebenzisa, nceda unxibelelane nomthengisi wemveliso.
3. Ufakelo lwemodyuli kufuneka luhambelane nayo yonke inkqubo esebenzayo yokhuseleko, kufuneka lube ngocingo oluchanekileyo kunye nobungakanani becingo ukuqinisekisa ukhuseleko lokusebenza nokusebenza ngokuthembekileyo.
4. iimodyuli ziya kuvelisa amandla ombane aphezulu ayingozi kukhuseleko lomntu. Kwizikhokelo zobungcali ngokungqinelana nemiyalelo kunye neenkcukacha zokhuselo lofakelo lwezixhobo, zinokusetyenziswa!
II. Ubume kunye neempawu zokusetyenziswa
Imodyuli ilungele umhlaba weHarmonic.
2. Imodyuli isebenzisa ubuchwephesha bokutshintsha ngokukhawuleza, ubuchwepheshe obuphambili, ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo.
3. ulwakhiwo seemodyuli, indibaniselwano eguqukayo, ulwandiso olulula, ufakelo olulula, ulondolozo olulula
Imodyuli ye-LCD inomboniso we-LCD waseTshayina kunye nokubonisa ityhubhu yedijithali ngeendlela ezimbini, ukusebenza ngokulula, ukugcinwa ngokulula, okufanelekileyo ekufumaneni iimpazamo endle.
5. Imodyuli ineendlela ezimbini zokutshintsha: umaphuli wesekethe omncinci kunye nefuse.
Egqithileyo I-N8 - 20 + 20 Amandla ombane aphantsi asebenzayo amandla ahlanganisiweyo amandla ombane asebenzayo Ukubuyekezwa kwembuyekezo yombuyekezo
UkuGcina amandla oMbane oMbane oMbane oMbane oMbane
Ukuhluza amandla oMbane oMbane
Umgcini wePaneli oDityanisiweyo waMandla
Ekrelekrele Capacitor Bank
Umlawuli oMelekileyo woMgcini
Isalathiso seMeko seMpapasho esiKrelekrele
Okrelekrele amandla ahlanganisiweyo Capacitor
IHarmonic yokuNciphisa iCapacitor
Isinxibelelanisi saMandla esiDibeneyo esiKrelekrele
Iimodyuli ezikrelekrele Power Capacitors
Okrelekrele aMandla oMbane
Isilawuli esiCwangcisiweyo saMandla oMbane
Amandla okrelekrele oMbane oMbane kunye neReactor
Amandla aphantsi oMbane oMbane oMbane oMbane
I-N8 - 20 + 20 Voltage ephantsi esebenzayo yamandla ...
N7-40 Kvar co mbuyekezo anti harmonic intell ...